Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Twitter na-agbakwunye na $ 0.823 Onye ọ bụla | Martech Zone
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Twitter na-eso ụzọ na $ 0.823 Onye ọ bụla
Satọde, Febụwarị 9, 2013 Sọnde, Febụwarị 10, 2013 Douglas Karr
Kemgbe Septemba, anyị na-eme obere ego iji nweta ndị na-eso Twitter na otu akaụntụ anyị. Ndị a abụghị akwụ ụgwọ ụmụazụ, nke a bụ eziokwu Mgbasa ozi Twitter ezubere iche na ịkwalite akaụntụ ahụ na ndị ọrụ ndị ọzọ. Mgbasa ozi Twitter na-enye gị ohere ịkwalite ma akaụntụ ma ọ bụ iji kwalite tweets. Anyị anwalebeghị nke abụọ, mana nsonaazụ nke nkwalite akaụntụ ahụ doro anya yana agbanwe agbanwe.
Ihe ndekọ a toro na 30% ngwa ngwa na-eji nkwado Twitter karịa enweghị. Anyị atụkwasịla ndị na-eso 887 maka $ 729.81 = ụgwọ nke 82.3 cents kwa onye na-eso ụzọ. Nke a bụ akaụntụ ejiri akara, ọ bụghị nke aka ya, yana nkọwa nke akaụntụ ahụ doro anya ma doo anya - ọ dịghị ihe dị egwu ma ọ bụ na-atọ ụtọ. Ọ dịghị ihe dị egwu.
Ọ kwesịrị ya? Ikekwe. N'okwu a, anyị na-anwa imepe obodo a ma chọọ naanị akụkọ dị mkpa ga-erite uru ma nye aka. Anyị anaghị achọ nnukwu ọnụ ọgụgụ, anyị na-anwa ịchọta ma gbakwunye ndị otu kwesịrị ekwesị. Saịtị anyị na-eto eto anaghị akwalite ego zuru ezu maka nloghachi dị mma na ntinye ego a n'oge a mana anyị nwere obi ike na ọ ga-eme n'ọdịnihu.
You bulie akaụntụ gị site na Twitter? You na-enweta nsonaazụ yiri ya?
Tags: akwalite akaụntụ twitterTwittermgbasa ozi twitternkwalite twitter
Nri anụ ọhịa ahụ na Rallyverse
Feb 11, 2013 na 1:51 PM
Ọ ga-amasị m ịnụ ka esi atụnye akụkụ nke mkpọsa a. Enweela m ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi Facebook mana enwebeghị ike ịbanye na mgbasa ozi Twitter.
Feb 12, 2013 n’elekere 11:03 nke abali
Naanị US na mkpụrụokwu ole na ole ezubere iche, Allison - mkpọsa ndị ọzọ na-emefu ego kwa ụbọchị ma soro ya na-agba ọsọ.